Excel kuGoogle Earth, kubva kuUTM zvinongedzo - Geofumadas
Excel kuGoogle Earth, kubva kuhutano hweUTM
Kukadzi, 2012 Downloads, Featured, Google pasi / mamapu
Ngationei nyaya yacho:
Ndakaenda kumunda kundovaka pfuma, sezvinoratidzwa mu tafura inotevera uye ndinoda kuifungidzira kuGoogle Earth, kusanganisira mifananidzo mishoma yandakatora
Iyo nyanzvi ye template ndeyeyechete chete:
Inoshandura UTM inoratidziraA Geographical in decimal format, nokuti ndizvo zvinoda Google
Inokubvumira kuti ugadzire zita renzvimbo yekuenda
Itai zita rokuti kml
Dzorerazve mafaira aripo, kunyange kana atove atogadzirwa
Inobvumira kushandisa html tags mu tsanangudzo, yakadai semifananidzo, hyperlink, nezvimwe.
The template yakagadzirira kuti spheroid isarudzwa, tinoziva kuti kune Google Earth tinofanira kusarudza WGS84.
Muchikamu chekutanga tinoisa data iyoGoogle ichakuratidza chitaridzi.
Mune maviri anotevera UTM inoratidzira, ichichenjerera kuti yedu system yakagadzirirwa kushandisa iyo comma uye poindi seyekuparadzanisa decimal sekuparadzanisa kwezviuru. Saka kurongeka senge 599.157,90 hakubvumidzwe kunofanirwa kunyorwa sa599157.90
Muchikamu chinotevera tinopinda munharaunda. Nekuingoisa pamutsara wekutanga, mamwe acho anozoshandurwa. Kunyangwe ivo vachigona kushandurwa manyore kuitira kuti iyo data yaive mumuganhu wenzvimbo mbiri. Saizvozvowo hemisphere; mune ino kesi ndiri kushandisa data kubva kuBogotá, saka ndinoshandisa Zone 18 neNorth Hemisphere.
Uye pakupedzisira tsanangudzo, ndizvo zvataizoona patinenge tavhara pane imwe nzvimbo muGoogle Earth.
Nzira yekutumira sei hurumende idzi kuGoogle Maps uye wozvidzorera kuGoogle Earth
Nhanho 1. Dhawunirodha data feed template. Kushandisa muenzaniso watakaratidzwa mumifananidzo iwe unogona download iyi template.
Nhanho 2. Isa template. Nokusarudza template ine data, sarudzo ichacherechedza kana paiva nedheta risingagoni kugadziriswa; Pakati pezvibvumirano izvi zvinosanganisira:
Kana iyo mihimbirano yemazamu isina chinhu
Kana hurumende idzi dzisingabviri nhamba
Kana nzvimbo yacho isiri pakati pe1 ne60
Kana munda wehemisphere pane chimwe chinhu chakasiyana neNorth kana South.
Rondedzero data inotsigira html zvemukati, senge iyo inoratidzwa mumuenzaniso iyo inosanganisira kuratidzwa kwemufananidzo. Izvo zvaizoramba zvichitsigira zvinhu senge zvinongedzo kumigwagwa paInternet kana iyo yemukati diski yekombuta, mavhidhiyo, kana chero zvakapfuma zvemukati.
Nhanho 3. Fungidzira iyo data iri patafura uye pamepu.
Nenguva iyo data yakadhindwa, tafura icharatidza deta data uye mapeji nzvimbo dzenzvimbo; Sezvaunogona kuona, kuburitsa kunosanganisira kushandurwa kwezvibatanidza izvi munzvimbo yepamagariro sezvinodiwa neGoogle Maps.
Kamwe ikoni painoburitswa, iwo mapoinzi akaiswa paGoogle Street View anogona kutariswa uye kufamba pamusoro pawo. Nekudzvanya pamifananidzo iwe unogona kuona iyo nhoroondo.
Nhanho 4. Dzokorora iyo data. Nekukanganisa iro data rekutakura riri muWGS84, sekushandiswa neGoogle. Asi kuita uku kunokutendera iwe kuti uchinje kune imwe projekti yekuronga uye uzorodze mepu. Semuenzaniso, ndiri kuchinjira kuna Clarke 1866 uye ndoona kuti maveti ari kuratidzwa pamepu.
Pano unogona kuona template inoshanda muvhidhiyo.
Nhanho 5. Dhawunirodha mepu yeKml uchishandisa iyo gTools sevhisi.
Iwe unopinda kodhi yekuodhaunura uye wobva wave nefaira raunogona kuona muGoogle Earth; Iko kunongedzera kunoratidza kwaungawana kodhi yekurodha yaunogona kurodha pasi kusvika kanokwana mazana mana, pasina muganho wematanho mangani anogona kuve mune yega yega kurodha pasi uchishandisa gTools API. Ingori mepu inoratidza zvinongedzo kubva kuGooogle Earth, iine matatu-mativi emhando maonero akaitwa.
Imwe sarudzo: Chinja macomputer kuva kml faira uchishandisa Excel macro
Kamwe iyo tabular data yazara mukati, zita reiyo kml faira uye kero kwazvinozochengetwa zvinowoneka kurudyi. mune ino kesi zvinoita kunge C: \_ Career 25 X.kml
Mutsara wezasi tinonyora zita iro rakasara richava mu kml file, munyaya iyi: Kusimudza Basa 25 X
Mhedzisiro ndeiyi: nekubata poindi iwe unogona kuratidza tsananguro yekoramu yekupedzisira yeExcel.
Pakupedzisira, kana tangova takagadzirira tinosvitsa bhodhi, uye faira inofanira kunge yakagadzirwa.
Mhedzisiro yacho, kana uchiivhura muGoogle Earth inotevera. Tarisa kuzita reiyo rukoko, sekudana kwatinoitumidza, uyezve pane iwo poindi nerondedzero yacho; kuvabata kunosimudzira kuratidzwa kwemashoko. Kana zvinhu kana mavara Iyo yakakura zvikuru, inokwanisa kuenzaniswa muGoogle Earth nekukodzera pakananga pakasarudzwa uye kusarudza zvinhu.
Nzira yekuwedzera sei mufananidzo kune kml
Izvi zvakajeka, fungidzira kuti mune zvakadzama zvebhangi yepamusoro ndinoda kuisa mufananidzo wepadastre yeplate, zvino muchitokisi rinowirirana nekududzira kwandinonyora:
Pfuma muganho, Cadastre-chikamu bhangi
Saizvozvowo, kana panguva iyo ndadana Photo, ndinoda kuisa mufananidzo wechitsipa cheimba, nzira yacho yakafanana.
Kana iwe uchida kuisa mitsara yakawanda, ita kopi yezviripo kuitira kuti vaende nemuumbi.
Hapana chikonzero chekuwedzera mazamu, kana iwe uchidaro, inogona kumisa kushanda.
Inoda kuti iwe ugamuchire kuurawa kwe macros apo uzarura iyo Excel file
Kana ikakutumira yekukanganisa meseji, zvinogona kunge iri iyo C: dhairekitori isina mvumo yekunyora, unogona kuyedza imwe dhairekita seC: \_ vashandisi \_ kurodha pasi \_ chero bedzi dhairekodhi riripo.
Kubva pano unogona kukanda the kml file sezvinofanira kunge.
Kudhanilodha template muExcel kunoda chipo chekufananidzira, chaunogona kuita nacho Paypal kana kadhi rechikwereti.
Mune zvimwe zvaunenge uri Geographic mapurisa ehupi Latitude, Longitude, uye iwe unoda kutumira kuGoogle Earth, the template is this.
Zvinogona kuitika kuti, kana uchishandisa shanduro, chimwe chezviitiko zvinotevera zvinogona kuoneka:
Mhosva 75 - Faira nzira.
Izvi zvinoitika nokuti nzira iyo yakatsanangurwa apo iyo kml file inoponeswa haigoneki kana pasina zvibvumirano zvechiito ichi.
Sezvineiwo, iwe unofanirwa kuisa nzira pane diski D, iyo ine zvirambidzo zvishoma pane dhisiki C inowanzove iri.
Iyo pfungwa dziri kubuda kuNorth Pole.
Izvi zvinowanzoitika, nokuti mumahwindo edu, sezvinoratidzwa mumirayiridzo ye template kuti ishande, sarudzo yezvemuganhu inofanira kusimbiswa munharaunda yedunhu:
-Paint, nokuda kwekuparadzanisa
-Coma, kune zviuru zveparadziri
-Coma, nokuda kwekuparadzanisa mazita
Saka, data yakadai se: Chiuru chimwe nemazana manomwe nemakumi masere mamita ane masendimita gumi nemaviri anofanira kuonekwa sa 1,780.12
Mufananidzo wacho unoratidza kuti uku kugadzirisa kwaitwa sei.
Ichi chimwe chifananidzo chinoratidzira kusarudzwa mumutsetse wekutonga.
Kamwe kana shanduko ichiitwa, faira yacho inogadzirwa zvakare uye ipapo, pfungwa dzichaonekwa apo dzinofananidzwa neGoogle Earth.
Kana iwe uine mubvunzo, nyora kune rutsigiro email editor@geofumadas.com. Iyo inogara ichiratidza iyo vhezheni yemahwindo auri kushandisa.
Previous Post«Previous Kudzidza AutoCAD Kuona
Next Post AutoCAD 3D course pamusuo wako, nokuda kwe $ 34.99Next »
114 Inopindura ku "Excel kuenda kuGoogle Earth, kubva kuUTM nongedzo"
Kana iwe wakatenga template, nyorera kune yekutsigira tsamba inoenderana neyako tsamba.
Kazhinji iyi ndiyo tsamba: mupepeti @ geofumadas. com
Tora chiratidzo HERE virker ikke. Hvor kan jeg får tak i den?
Tora chiratidzo HERE haishande. Ndingaiwanepi?
Mhoro, ungagone kugovera demo kana kwechinguva bvunzo application "Excel kuenda kuGoogle Earth, kubva kuUTM kuronga", chete nezvezvinangwa zvedzidzo uye mukuita ini ndinosimudzira chikumbiro chako. Ndatenda
Endai kumasangano epakati eWindows yenyu uye gadzirai pfungwa yacho separator separator uye comma sezviuru separator.
Kana iwe uchiri kunetseka nyorera kune email inotsigira yakauya nekutenga template.
Wueber Bogado inoti:
Iyo inonditorawo ini kuNorth Pole uye nzvimbo yegore iri kuAsunción del Paraguay
Unogona kundibatsira ndapota here?
Dambudziko racho rakagadziriswa nekutsigirwa.
Yaiva dambudziko rekuenderana nemitsva itsva yehofisi 365 uye 64 bits.
Kana dambudziko nderokugadzirisa kwemukati kwehutano hwako.
Iwe unofanirwa kuva nechokwadi chokuti chinhu chisina kuiswa chinowanikwa, chakadai separaratorator yemirasi, chinhu chisina kuve separatidzi yekunyorera kana separator separator.
Kuti uwane rubatsiro rwekutenga muenzaniso, tumira e-mail yekutsigirwa inofambidzana nekutenga.
Ulisses Ribas Junior inoti:
Tevedza zvinokurudzirwa zvesaiti, isa ruzivo uye udzoke kana kukanganisa »Microsoft Visual Basic» Kukanganisa munguva yekuuraya «13»: Type Incompatíveis.
Chikonzero nei iwe uchitumira dheta kudura, ndechokuti muma windows yako unofanira kuita izvi kugadzirisa:
Icho chirevo, separadziri wezviuru
Iyo nharo, separarator yezvimedu
Iyo nharo, sevhesiyano yakarongwa.
Kana uine kusava nechokwadi, takakutumira email.
Hazvina Masvomhu zvakanaka, akakutumira kuna North Pole, ndakazviita kunyange pamwe Data kuuya sezvo muna vachivapa uye iwe anotumira North Pole, zvinoita sokuti aitamba kuti cobreis chimwe chinhu uye kumusoro zvikasashanda, tariro kugadzirisa dambudziko racho.
Kana ini ndisingadi kudzorera kwemari yangu.
Wakaona here nzvimbo yekuenda kunzira?
Ini ndinomhanya chirongwa uye ndinowana «Mhanya-nguva chikanganiso error75´:
Iko 76 kukanganisa kunowanzobatanidzwa nefaira iwe uri kutaurira kuti faira inofanira kusikwa.
Zvakanaka kuti iwe unoshandisa nzira mumutauro D: uye kwete C: nokuti kazhinji iwe hauna mvumo yekunyora yakananga mu C:
Ichowo chirevo chakanaka chekudzokorora nzvimbo dzepakati nzvimbo dzakadai sekuparadzanisa decimal uye nhamba sezviuru zvepararadzi.
Pasina mubvunzo iwe unondiudza.
Carlos Estopier inoti:
Hi, ndiri kushandisa Excel yeMac uye ndinowana mhosho nhamba 76
Antônio Felipe Abem Athar parente inoti:
Quero Excel mapeji eGoogle e Hart izwi rekushandura X yz
iyo yakasarudza yaunayo yakarurama.
Iwe unayo here paExcel yepamusoro kana mawindo emafaira ekugadzirisa?
Kuti uite sangano, iwe unogona kuzviita kumunyori we email (pa) geofumadas. com
Francesca Mengozzi inoti:
Ndatenda nekunditumira iyo link. Zvino, chero zvaanoita, anonditumira kuNorth Pole.
Ndinoisa UTM N kutanga uye E gare gare, uye shure. Ndine zviuru zvakaparadzana nemitima uye zvigadziriswa nezvidimbu.
Mibatanidzwa yacho inobva kuchamhembe kweChile (19 s).
Iwe wakanga watumirwa kuhofisi, chinetso ndechokuti iwe wakanyora tsamba yacho zvisina kururama,
Takatumira kune email yakarurama yawakanyora.
Ndakabhadhara kaviri nokuda kwechigadzirwa uye handina kumbobvira ndagamuchira template.
Unogona here kuitora kwandiri, tapota?
Nhamba yekutengesa i5SV58331V3337363F
Mhoroi Carolina, isu takatutumira iwe link kune email yako. Zvinogona kuitika kuti akaenda kune spam yako.
Carolina Trujillo inoti:
Mhoroi, ndinokuudza kuti ini ndakutobhadhara kare asi hauna kundipa mukana wekutora. Bhadhara kubva kuPayPal kuenda kuzita raCarolina Trujillo uye nhamba yekutambira yaive 797849290 × 9052642
Ndakatotumira template ku email, tichitsanangura zvishoma zvatiri nyaya yacho.
Iyi template yakagadzirirwa kusvika pedyo nePINPX points.
Kuti uwedzere kune mamwe mapoinzi, zvinodikanwa kuti uchinje kodhi. Tumira iyo template kumharidzo @ geofumadas uye isu tichaiwedzera.
Tiri kuedza kuparadzira spreadsheet, asi kana tazarura file ya .kml neGoogle pasi, isu tinongowana dheseti inoenderana nemitsetse yepakutanga yespredishiti. Tingaita sei kuti tiwedzere kujekesa huwandu hwemashoko atinoda? Une mazamu ekuti iwe upinde?
Mangwanani akanaka Juan Pablo. Isu takatsamwira iyo link kune yako email, yekutsvaga. Pamwe yaive yaenda kune spam yako.
Uyezve, takabhadhara chikwereti chekubhadhara chawakaita.
Kana iwe une imwezve kusava nechokwadi, tiudze
Vakandinyudza nefaira, ini ndakabhadhara "chiratidzo chekupa" kaviri uye ini handina kuwana fomu.
75 kukanganisa kunoreva kuti nzira yaunotora haina kodzero yekunyora, panzvimbo yekuita nayo zvakananga pa diski C, edza imwe kero, kana iri subdolder kana E disk
Jean Braga inoti:
Meu inodhura, iyo inofanirwa kushanda uye inopinda nemapurisa emafasitirwo, dambudziko racho rinopfuurira.
Erro kubva pakuwana nzira / matura ».
Nzvimbo kana zvinyorwa zvinyorwa kml em: c: \_ Career 25 X.kml
Tsvaga: Basa Rokukwirira 25 X
Ndapota ndibatsirei ndigadzirise dambudziko iri.
Zvakakanganisika kuita sangano.
Kana kuti ponto (.) Ea virgula (,) isão conforme abaixo.
Tentei inoshandura kufambisa mascara zvinopfuura, asi não deu certo.
Sei faço kugadzirisa dambudziko iri ???
Nzira dzakawanda dzaunoita kuti uise mafaira, somuenzaniso
faira: /// C: /Users/geofumadas/Pictures/005c_got.png
Nzira iri nyore yekutsvaga nzira, kuvhura google chrome, uye kubva pano iwe unoshandisa «ctrl + o» uye tsvaga iyo faira. Mune url iwe uchaona nzira.
Zvakanaka mangwanani zvakare,
Ndinokutendai zvikuru nokuda kwekubatsira, tatove tagadzirisa kukanganisa uku, zvisinei, mubvunzo wedu ikozvino ndiyo nzira yekuisa mifananidzo mumatunhu eko. Ndeipi nzira yatinofanira kuitisa?
Mangwanani akanaka, Gustavo.
Tarisa kuti mumasangano ekugadzirisa kwekombiyuta yako, kuti kuparadzaniswa kwezviuru ndiwo mutsa uye kusarudzwa kwezvakawanda ndeye pfungwa.
Kana iwe uchiri kukonzera zvinetso, nyora kune mhariri, kutumira faira yako nemashoko awakapinda.
(mhariri pa geofumadas. com)
Kwaziso kuna Oviedo
Ndakatenga kutenga yeExcel template, kana kubudisa KML file, iyo inogadzirwa asi nhaurirano muGoogle Earth haifaniri kuitika panzvimbo yako, inotitora nguva imwe neimwe kuenda kune imwechete (North Pole).
Isu tiri kuchamhembe kweSpain uye pfungwa yedu ndeye kushandisa template kuti uwane pfungwa dzakatorwa nemifananidzo yavo.
Dzimwe nguva inoenda kune faira ye mail isina junk,
Chengetedza, uye kana une matambudziko, tinyora kwatiri ku email inouya nekutengesa.
Anodiwa, ndakatenga kutenga nePaypal, asi ini handisati ndatumira email nekombiyuta yekubudisira. Inguva yakadini yekumirira?
Takakutumira iyo link netsamba. Nekudaro, iwe unogara uchifanira kuona spam, dzimwe nguva inoendako.
Ndakatotora mubhadharo kuburikidza nePaypal, asi ini handina kugamuchira chero chibvumirano chekutsvaga template. Ndakatarisa spam uye haina kuonekwa kana. Zvinotora nguva yakareba sei kuwana tsamba?
Takatodzorera template yawakatenga kaviri. Kana iwe uine zvimwe matambudziko, tizivise.
Takakupindurai netsamba. Dzimwe nguva zvinoenda kune spam, asi isu takutumira iwe chinongedzo. Kana uine matambudziko tizivise.
CIRILO GIRALDO SALAZAR inoti:
Uye kupedzisa kuzivikanwa kwekutengeswa kwakaitwa kuburikidza nePayPal nde:
Ndapota, ndinotarisira kupindura nokukurumidza.
Zvenguva ... ndatenda
Geofumadas.com zvinyoro zvinyoro, ini ndabhadhara kuburikidza nePayPal chigadzirwa "KUDZVANYA KUTI GOOGLE EARTH Kubva UTM COORDINATES" uye panguva yekuburitsa chirongwa ichi chinondidzosera kuPayPal, uye kuti nekukanganisa zvakare $ 4.99 USD yakabhadharwa.
Handifungi kuti kuwana chigadzirwa ichi chinokomborera ndinofanira kubhadhara madhora $ 10.00 USD.
Ndiudze kuti chii chandingaita kuti nditeerere purogiramu kana kuti ndinofanira kumirira kana vakanditumira email yangu yega; chii chaunofanira kuita kuti ndiwanezve kubhadhara kwandakaitwa muzita rake.
Tarisa spam. Dzimwe nguva anoendako. Kana iwe uine matambudziko, nyorera kune iyo email inoonekwa pane invoice.
Ndakatenga template uye handina kuitora mumakero, sezvandiri kuita kuti vanditumire zvakafanana, Ndinotenda.
Tarisa email yako Spam.
Dzimwe nguva anoendako. Kana iwe uine chero dambudziko, pindura kune iyo email inoratidzwa mune yekubhadhara kusimbiswa.
carlos chorus inoti:
Ndakatotanga kubhadhara uye faira haina kusvika.
Gumiguru, 2015 pa
Shandura nzira iyo faira ichaponeswa.
Zvichida, haisi paC disk, asi pane D disk, sezvo kunyora C kunyora dzimwe nguva hakuwaniki.
Ndakanga ndine dambudziko nekamberi yedhira rePC uye ndaifanira kuchinja. Ndaida kushandisa iyo fomu kuti ndipfuure UTM kuGoogle Earth uye inondipa mashoko anotevera
Iko 76 kukanganisa kwakaitika panguva yekumhanya
Nzira yacho haigone kuwanikwa.
Svondo, 2015 pa
Iyo iri mune yako mail. Tarisa kuti dzimwe nguva inoenda kune spam
Juan Carlos Vega inoti:
Ini ndatove ndabhadhara, ndakatora kupi iyo template ????
Iyi template inogadzirwa kuti ipinde muUMA data. Zvimiro zvinogona kuwedzeredzwa kuve ma degree degrees kana degree / maminitsi / masekondi.
Hungu, unogona kuwedzera mifananidzo.
Chinja mhando ye icon ... haisi mukushanda kwetemplate yazvino.
Kugadzirisa template pasi pemamiriro aunotarisira… inodhura US $ 50.
hi g! Pane dzimwe nguva wakandibatsira kuisa mafaira angu kuenda kuGoogle pasi, ini ndiri kufarira iyi yakanakisa template uye ndinoda kubhadhara mari yakakumbirwa, asi ndinoda kujekesa zvimwe kusava nechokwadi:
1-Inogona kugadziridzwa kushandisa digiri, maminitsi nemasekondi kana madigiri.
2-Ini ndinogona kugadzirisa iyo mhando yeiyo icon nekurongedza.
3-ndinogona pane imwe nguva kuwedzera mifananidzo.
Chii chaizodhura kana izvi zvigadziriswa zvakaitwa.
Zorodza peji, iwe unofanirwa kuona chinongedzo cheKutora / kutenga
Julian Morales inoti:
Ndinoda kuwana template iyi, inotengeswa kana kuti ini ndinogona kuitora
iwe unogona kuratidzira kupi kurikubatanidza kunobatanidzwa, ini handigoni kuiwana munyaya yacho
Svondo, 2014 pa
Shandisa chibatanidzwa chiri munyaya yacho
Chirongwa chacho chinoratidzika zvakanaka. Ndinokwanisa sei kuikanda?
Ndingakwanisa sei kuburitsa fomu kuratidza?
Hugo Montes de Oca inoti:
Chirongwa chakanakisisa chekuita basa rehofisi, nhume
zvinoratidzika sechinhu chinonakidza, zvinenge zvichidikanwa kuzviratidza
hesi zvakanaka husiku dambudziko rangu nderekuti ndakatanga kubuda pandakaipa kuti igadzire kml "75 utekelezaji chikanganiso" uye ndobva ndaita zvavakataura ini ndinowana "76 kuuraya chikanganiso" ndinogona
Titumirei faira kuti tiongorore.
Kusvika ikozvino yakashanda zvakajeka, zvingangove kuti imwe munda uri kutaurira imwe nzira yakapoteredza.
Mikel Belasko inoti:
Kunyanya inovashandudzira kune latitude 32400.000000 uye kureba -1.000000 ° Ndichishandisa iwo mamwe iwo managanheni ekushandura Calculator, zvisinei, ini ndinotarisa kuti yemangu yepakutanga yakanaka, sezvo ini ndinogadzirisa pfungwa yacho muGoogle google, ndinoisa zvinongedzo zve Calculator. uye zvinondiisa mushe. Ndatenda zvikuru
Zvese zvandinoita (Ini ndakagadzirira zvese kuitira kuti madhimoni aende nenguva uye zviuru nezviuru zvemakomichi) zvinogara zvichindiendesa ku equator. Iyo yakareba ini yandinofunga yakandinakira, asi iyo latity i0. Kunyanya ini ndakaisa iyi UTM ED50 datha iyo isiri wgs84 yeyenharaunda yekuSpain Spain (Navarra), uye zvakarongeka yakazopera kuGulf of Guinea.
Nhare yangu pay account yakabatanidzwa kune imwe nhoroondo ye email uye ini ndaizonakidza kana iwe uchizotumira iyo iyi kero ye email kubva kwandakatumira shoko. Ndinokutendai zvikuru
Zvingangodaro, iwe uri kutarisana nezvinetso zvezviuru.
Edza kupinda mazamu akabatanidzwa aUTM, pasina nguva kana kuti maitiro kuti uone kana ichi chiri dambudziko.
Wobva waenda kumatunhu emadziro emuchina wako wochinja. Iwe unodikanwa kuti ushandise comma sechiuru vanoparadzanisa uye rondedzero kusiyanisa; poindi seasiparadzaniswa.
Ini ndagadzira iyo faira asi kana ichiona pasi pano, inoendesa kwandiri kunhamba yeN.Ndinokuudza: iyo UTM inoronga iyo yandinoshandisa yakashandurwa kubva kunoratidzwa muhurefu uye hurefu, asi kushandisa iyo ED50 datum panzvimbo yeWGS84. Ini ndinofanira kuvapfuura ivo vasati vapinda muUTM fomu inoshandiswa muExcel? Zvisinei, ndakafungidzira kuti kunyangwe kana vasina kuwirirana, mukana wacho haungave wakanyanya, nekuti kana ndikaenzanisa mamwe marongero evaya vandinoshandisa neED50 navo muWGS84 (ivo vanobva kuSpain), kukanganisa kune mashoma mita, asi pamepu Ini ndinofunga kuti hapana chaungaona, kunyangwe marekodhi ari mu "mavara". Pfungwa ipi neipi yandiri kukanganisa? iyo nhanho uye fomu yekuita seyakarurama (dunhu ndiro 29 kwete?).
GLORIA DOMINGUEZ inoti:
Ini ndakanyora nezvekushandura kubva pa geographic kuenda kuUTM, asi ini ndine dambudziko nefaira rekugadzira iyo faira kuti iende kuGoogle kana ichigadzira faira asi iwo mapoinzi ese anosara ne180grades 0minutes 0.00Seconds North uye ine Latitude 74 degrees 0 Miniti uye 0.00 masekondi Kumadokero zvakare hakuratidze pfungwa yacho pamepu. Ndinoonga kana muchikwanisa kundibatsira. Gloria Dominguez
Tarisa mail spam, dzimwe nguva kutora link template kunoenda ikoko
Ndokumbirawo mundisimbise kuti sei ndisina kuwana template yekurodha google Earth mafaera, kuti ndipasire maratidziro enzvimbo kuUMMA akaita. Ndatenda GEDL
Takanga tisina kuedza chaizvo paMac IOS.
Kutenda nekupindura, ndakaita izvo zvandakanga ndaudzwa. Dambudziko rakaenderera, zvakadaro, ini ndakazochinja zita rakapihwa kune kml faira rekutumira kunze uye nekuvandudza chinhu. Kubva pane rutsigiro rweshamwari ndakachinja kubva pa «\_ SIMV \_ MAPAS.000.000.000.kml» kuenda ku «\_ SIMV \_ MAPS \_ test.kml». Ikozvino haienderi kune iyo folda yakagoverwa kwekutumira kunze asi pakupedzisira iyo faira yakagadzirwa, iri mune iyo imwechete iyo folda iyo iyo spreadsheet iri mukukutu.
Ndinotarisira kuti unogona kuziva mhosva, ndakanga ndashanda zvakanaka pawindo asi zvino ndiri kushanda paMac uye ikoko tinoenda, kana mune mazano angandifarira. Ndinotenda zvakare
Edza kushandisa zita uye nzira iri nyore, somuenzaniso:
Iva nechokwadi chekuti une kodzero yekunyora munhare iyo, uchiedza kugadzira faira ipapo kubva pane mac mac browser.
Ndiri kuedza kushandisa Mac, yakandiudza pandinenge chamutsa "kukanganisa kwakaitika '52' Runtime, zita kana nhamba isiri faira."
Inondipa zvingasarudzwa zvina, iyo yekutanga yakacheneswa, ndinogona chete kusarudza chero chekupedzisira katatu:
1 Enderera 2 Kupedzisa 3.Dhisheni 4.Help
Ndinosarudza Kudemba uye ndinobva pahwindo rinoti:
'Macro yakagadziridzwa yeGeofumadas
Iwe unofanirwa kuishandura ku kml format
Iwe unogona kuita izvi ne gvSIG kana chero imwe chirongwa cheGIS
antonio becerril inoti:
Ndinofanira kuisa dwg kukwidza kuGoogle pasi, sezvandinoita, mufananidzo ndiyo inokonzerwa nemugwagwa mumitungamiri ye utm
Zvinonyanya kushanda ndezvekuti kubva paInternet browser, tsvaga kero yacho kuti uone nzira, nekuti kana uine zita regwara rine nzvimbo isina nzvimbo yakadai se: «zvinyorwa zvangu», iwe unofanirwa kuinyora sezvazviri mu URL ye browser.
Jorge Echeverria inoti:
Mhoro unokwanisa kundibatsira ini kuwana "75 nguva yekumhanya chikanganiso" ndipe mienzaniso ye "nzira" dzekugadzira iyo kml faira na. semuenzaniso zvinyorwa zvangu kana mukukodha kana pa desktop. Ndatenda
Ndatenda, ndaiva mu spam.
Tarisa email ye SPAM, pane dzimwe nguva ikoko inosvibisa shoko rinouya nehutano hwekutsvaga zvakananga.
Chero mamiriro ose ezvinhu, takazvitumira zvakananga kune email yako.
Ndakaita chikwereti nebhapal asi faira haisati yatsvaga, kana ichida id. Ndiri kutumira kune mutengesi.
Iyo chete nzira yatinayo, iri kushandisa PayPal kana debit / kadhi rechikwereti rinobatanidzwa nePayPal.
JOSE RIVERA CABALLERO inoti:
Ini nokukurumidza ndinoda kuwanikwa kweExcel kushandiswa kuGoogle Eaarth, asi ini ndine kadhi yebhandi chete.
Chii chandinofanira kuita, kana vane hukama pakati pePeru, kuita bhanji kutamisa?
Ndapota, ndinoda kuiswa neRGENCY.
Nditumirei kero yemufananidzo wauri kushandisa kuti uedze uye ona zvinoitika.
Dzimwe nguva mubvunzo kuti nzira haina kuvakwa zvakanaka. Imwe nzira yekuona kuti nzira iyoyo yakaita sei kuvhura iyo faira refaira kubva kubhurawuza, kudzvanya kurudyi pamufananidzo uye kusarudza kuvhura ne ... uye sarudza iyo browser; saka unotarisa nzira iri pamusoro.
Ndakaedza kuwedzera mufananidzo kubva mumugwagwa wemunharaunda asi hahushandi, pandinopinda mutsara sezvaunoratidzira, mufananidzo wacho unowedzerwa zvakasiyana uye kwete sechikamu chechimwe chinhu. Uyewo kana ini ndichiedza kuratidza mufananidzo chete chimiro chinouya asi kwete mufananidzo.
Tarisa mumabhadhi kana ini ndakabatana.
Kana iwe hausi, iwe unogona kunyora ini editor@geofumadas.com
uye isu takarongedza.
Hello Editor, ini ndinoda kutaura newe pamusoro pe template yawakanditengesa, iwe unogona kuenda kwandiri mumutambo?
Zvakanaka, mukuita zvakakosha ndekuzvizarura nehurongwa hweGIS uye uchitumira kune kml.
Kana zvisingakanganisi, tumira ku email yangu uye ini ndichakuudza kana ini ndikakwanisa kukubatsira, nokuti ndinogona kuona kuti mafura acho ndeapi.
Mutori wenhau haana kunzwisisa zvaunoreva
Ndekupi kwandingawane rubatsiro rwemunhu kubva kune odhita ... Ini ndinokurumidza ndinoda rubatsiro rwako, hazvina basa kuti zvinokubhadharisa here, ndatenda.
sorry kuti vari mumhando yakanakisisa, humwe huwandu hwe600 wandinayo huri nani.
Nzvimbo yekufarira: Actán steels
Izvi ndizvo zvandiri kuda kushandura kuita mapoinzi echido vhezheni google pasi, chinhu ndechekuti pane zvinopfuura mazana matanhatu emapoinzi ezvekuda izvo zvandinoda kuburitsa mu kml fomati? Handizive kana iwe ukatsanangura ...
Tipei muenzaniso wekuti sei dhesi yepfungwa ndeye, uye kuti ndeapi maitiro ayo.
Mhoro ... ndine urombo ini ndoda kushandura yakazara faira yemapoinzi ekufarira pamwe nehurongwa hwavo kune kml fomati kuti uione muGoogle pasi ... mumwe munhu anogona kunditungamira, ndatenda.
Zvakanaka, ndinofara kuti yakashanda.
Ndakatarisa zvakare uye zvechokwadi chaimo Nzvimbo vanofanira kuva pfungwa grade separator, kuti koma separator uye koma zviuru separator uyewo makagadzirira.
Takagadzirira, tinoonga nekuda kwemupiro!
Ndakatarisa uye zvakanaka, nditumirei zvakafanana kuIndonesia.
Zviri pachena kuti kune kupesana pakati pezvikwata zveExcel uye mairi ayo ari kutumirwa.
Iwe unogona kuona izvo zviri mubato rinotungamirira, nzvimbo dzemo. Cherechedza kuti pfungwa yacho inoparadzanisa yezvakadzama uye comma separator yezviuru uye comma uyewo separador yematanda.
792713.85 mumutambo we X
1127836.33 pa Y kurongedza
Uye kune zindo rinoti:
'Kukanganisa' 13 'kwakaitika panguva yekumhanya.
kugumisa, kubvisa kana kubatsira.
Mhando idzi hadzienderane »
Ndiyo mapepa epa dot.
Unofanirwa kunyora deta iri mufomu:
Kwayedza Nekuti template ndeyekutarisa makomichi kuti ipatsanure zviuru nezviuru zvekuparadzanisa zviyero; Unofanira kuishandisa nenzira iyoyo.
Aya ndiwo magwaro angu,
uye pandinoita nzira, nditumire kuIndonesia uye nhaurirano idzi dzinobva kuBolivarian Republic of Venezuela, chero mazano?
Yorodis Ramírez inoti:
Mibvunzo yangu yese yakapindurwa .. !!
Elías González inoti:
Yekumhanya-nguva kukanganisa '75':
Nzira / Faira Kukanganisa
Imhaka yekuti ndakarambidza kugona kutyaira C: kuchinja nzira inoigadzira pasina dambudziko. Ini ndichaedza kugadzira iyo inogadzira iyo polygon.
Iwe uri kupinda kumashure, ona kuti urongwa hwako ndiNorth, East (Lat, Long)
iyo iri mu template iyo iri muEast North (Long, Lat).
Iwe unofanira kubvisa zvinyorwa, kuitira kuti zvipinde se nhamba.
Ndakaedza uye inowira munzvimbo yako, edzazve uye undiudze.
Ndinofungidzira ndichafanira kuita zvigadziriswa kuitira kuti urongwa hwehutungamiri huve rwemazuva, hurefu hunowanzoshandiswa zvikuru.
Pano ini ndinosiya dzimwe nhaurirano dzinotorwa mumunda muDominican Republic nemitemo inotevera:
Apo ini ndakaedza kuakanda iwo vakawira muSouth America.
Ndinokutendai mberi ... !!
Ndinokurudzira kuti uongorore zvinotevera:
Yeuka kuti iyo orthophotos yeGoogle Earth yakadzingwa, ine dzakasiyana dzakasiyana. Saka paunenge uchigadzira zvinoratidzira izvo zvaunoziva, pamwe nethemplate, simbisa izvo zvinowirirana neGoogle Earth zvinoratidza, kuti uone kana ichienderana neyawakaburitsa kubva template uye Datum WGS84.
Chii chinofadza kugutsikana ndechekuti hurumende inofanana, kuti irege kuva nekanganiso yekuverenga.
Kana iyo kuronga yakafanana, asi yakadzimwa kubva pamufananidzo, zvinogona kuti kukanganisa kuri kubva pamufananidzo. Chero nzira ini ndinokurudzira kuti vataure zvikanganiso zvavanowana, sezvo ini ndagadzira iyo template yekushandisa mahara asi zvinoda kuti vandipe mhinduro nekutarisa.
Nhanho inotevera ichange iri yekuunza polygon, tichaona pane imwe nyaya.
Kuti uise migwagwa mumutauro wemo, tarira chinyorwa ichi
Achifungidzira kuti faira iri panzvimbo C: /Users/Usuario/Downloads/woopra_ios.png, ipapo mutemo ungadai uri:
src = »faira: /// C: /Users/User/Downloads/woopra_ios.png»
Inguva yakawanda sei iyo kushandiswa munzvimbo yako ye19?
Kana iwe ukwanisa kundinyorera ini kurongedza, kuti ndionekwe.
Zvinoratidzika kuti iwe hauna kodzero yekunyora mubhuku reC:
Edzai nzira mukati mezvinyorwa zvangu zvemashandisi.
Unofunga kuti uri kushandisa WGS84 here?
Tarisai, ini handizivi kana sarudzo munyika yako ine chero ipi zvayo yenhema.
Inguva yakawanda sei iyo kusununguka?
Kusvuta, nekuti kunyora nezve idzi nyaya iwe unofanirwa kuputa fodya yembanje ... Hehe.
Marcos Diaz inoti:
Ndinovonga nekuda kwechipo .. EXCELLENT .. !!
(Nei Geofumadas ??)
Ndakanga ndichiita basa rekuisa mifananidzo kubva kune imwe nzvimbo yekunyorera uye ini handigoni kuzvigumisa zvinogutsa, kana iwe ukwanisa kuwedzera zvakawanda pamusoro pokuti ungazviita sei nenzira iyi sezvo yakandishandira ini kuisa mapikicha kubva pawebhu webhusaiti.
Ini ndakapindawo mumakominari muZone 19N uye iyo data yakadzingwa zvachose.
Wander Santana inoti:
Zvakanaka masikati Gabriel,
Mutsamba dzangu dzeUTM mapurisa, ane nzvimbo ye19, yeNorthern Hemisphere, kunyanya muDominican Republic, inowira dzichibva kune imwe nzvimbo uye munharaunda idzodzo. Ndakadzokorora nzira iyi pane dzimwe nguva, data yakasiyana uye mugumisiro wakanga wakafanana. Ndinokutendai mberi nokuda kwekupinda kune hanya neni.
Ndinofunga, ndinofunga kuti aizova 2 Version template ichi uye akaita webasa kuna AutoCAD pfungwa uye Plines
Ndizvo here nokuti tinofanira kutanga tanga faira isina chinhu?
Ini ndichaedza kunzwisisa mashandiro anoita macros, nekuti zvinoita kwandiri kuti kubva pane izvi, zvichave nyore kugadzira ipoligoni ine maveti akapinda. Rukwaziso rwose …